Dhavhidha yeIOS / Apple
Zuva rinobudirira: May 25, 2019
EasyBiz Mileage Tracker ("us", "isu", kana kuti "yedu") inoshandisa Application EasyBiz Mileage Tracker mobile (inotevera inonzi "Service").
Iri peji rinokuzivisa nezvematongerwo edu maererano nekuunganidza, kushandiswa uye kuziviswa kwepadha rako pachako paunoshandisa Sangano redu uye zvisarudzo zvaunosangana nazvo nedhimwe dhesi.
Tinoshandisa deta yako kupa nekuvandudza Service. Nokushandisa Sangano, unobvumirana nekuunganidza uye kushandiswa kwemashoko maererano nemutemo uyu. Kunze kwekunge zvimwe zvakatsanangurwa muNyaya yeChinyorwa CheShoko, mazwi anoshandiswa muNyaya yeChinyorwa Chedu ane zvazvinoreva zvakafanana neMagariro neMagariro edu.
Basa ndiyo EasyBiz Mileage Tracker mobile application inoshandiswa neAlexBiz Mileage Tracker
Dunhu Dunhu rinoreva dheyo pamusoro pehupenyu hwevanhu vanogona kuonekwa kubva kune iyo data (kana kubva kune iyo uye mamwe mashoko kana tiri mune yedu kana kuti zvingazoitika kwatiri).
Kushandisa Dhiyabhorosi iyi data yakabatanidzwa zviri nyore kana inoshandiswa nekushandiswa kweBasa kana kubva muNhandare yehutano pachayo (somuenzaniso, nguva yekushanyira peji).
Cookies mafaira maduku akachengetedzwa pafoni yako (kombiyuta kana foni device).
Mutongi weDhina anoreva munhu wepanyama kana wemutemo (uyo ari oga kana kuti pamwe chete kana akafanana nevamwe vanhu) anogadzirisa zvinangwa uye nenzira iyo chero ruzivo rwemunhu oga, kana kuti runofanira kuitwa, runoshandiswa.
Nechinangwa cheMutemo Wechirongwa Chedu, isu tiri Mutungamiri weData reMunhu WeDain Data.
Data Processors (kana Service Providers)
Data Processor (kana Mupiro Webasa) zvinoreva chero munhu wepanyama kana wepamutemo anotonga data panzvimbo yeDeta Controller.
Isu tinogona kushandisa masangano eVatengi veNzvimbo dzakasiyana-siyana kuitira kuti tishandise data yako zvakanyatsobudirira.
Subject Subject (kana User)
Dhiyabhorosi Nyaya ndeye munhu wega wega ari kushandisa Ushumiri hwedu uye ndiwo musoro wePeople Data.
Mashoko Ekuunganidza uye Kushandiswa
Tinounganidza mhando dzakasiyana dzemashoko nekuda kwezvinangwa zvakasiyana-siyana kupa nekuvandudza ushumiri hwedu kwauri.
Mhando dzeDhina Dzakatorwa
Paunenge uchishanda neThisita redu, tinogona kukukumbira kuti utitore mamwe mashoko anozivikanwa anogona kushandiswa kusangana kana kukuziva iwe ("Personal Data"). Mashoko ega ega anozivikanwa angasanganisira, asi haasi kugovera kune:
Zita rokutanga uye zita rekupedzisira
Cookies nekushandisa Data
Paunopinda muThisheni nefoni, tinogona kuunganidza mamwe mashoko ari nyore, kusanganisira, asi kwete kune, rudzi rwefoni yako yaunoshandisa, yako yefoni yedhijiti yakasiyana-siyana, kero ye IP ye mobile device yako, mobile device operating system , mhando yefaira yeInternet browser iwe unoshandisa, idhenzi dzekushandisa dzakasiyana nedzimwe tsanangudzo yekuongorora ("Use Data Data").
Isu tinogona kushandisa nekuchengetedza ruzivo pamusoro penzvimbo yako kana iwe ukatipa mvumo yekuita izvi ("Data Data"). Isu tinoshandisa deta iyi kuti tipe zviitiko zveTashumiri redu, kuvandudza nekugadzirisa basa redu.
Iwe unokwanisa kuvharidzira kana kudzivirira mazano emunzvimbo apo iwe uchishandisa Sangano redu chero nguva iyo nenzira yezvigadziro zvako.
Tinoshandisa makiki uye teknolojia yekutsvakurudza yakafanana kuti titevedze basa redu reThisita uye tine mamwe mashoko.
Cookies mafaira ane zvishoma zvedhizimusi zvingave zvinosanganisira asina kuzivikanwa chiziviso chakasiyana. Cookies inotumirwa kushanduro yako kubva kune webhusaiti uye yakachengetedzwa pafoni yako. Dzimwe nzira dzekutengesa zvinoshandiswa dzinoshandiswa zvakadai semabhaikoni, mathesi uye zvinyorwa zvekuunganidza nekutevera ruzivo uye kuvandudza uye kuongorora Sangano redu.
Iwe unogona kurayira musikana wako kuti arambe maokie ose kana kuratidza kana cookie iri kutumirwa. Zvisinei, kana iwe usingagamuchiri makiki, unogona kusakwanisa kushandisa zvimwe zvikamu zveTe Service.
Mienzaniso yekiki tinoshandisa:
Session Cookies. Tinoshandisa Session Cookies kuti tishandise Sangano redu.
Preference Cookies. Tinoshandisa Preference Cookies kuti tiyeuke zvido zvako uye zvakasiyana-siyana.
Security Cookies. Tinoshandisa Security Cookies nekuda kwezvokuchengetedza.
EasyBiz Mileage Tracker inoshandisa data yakaunganidzwa kune zvinangwa zvakasiyana-siyana:
Kupa uye kuchengeta Sangano redu
Kukuzivisa iwe nezvekuchinja kuTe Service
Kukubvumira kuti uite nhengo dzekubatanidza dzeThisita redu apo unosarudza kuita saizvozvo
Kupa vatengi vatsigiro
Kuunganidza kuongororwa kana ruzivo runokosha kuitira kuti tigone kuvandudza Sangano redu
Kuongorora kushandiswa kweTe Service
Kuona, kudzivirira uye kugadzirisa nyaya dzehutano
Nheyo dzepamutemo dzeKushandisa Personal Data pasi peGeneral Data Protection Regulation (GDPR)
Kana iwe uri weEurope Economic Area (EEA), EasyBiz Mileage Tracker mvumo yepamutemo yekuunganidza uye kushandisa mashoko ehupenyu hwako anorondedzerwa muNyaya yeChinyorwa chinobva kune Dunhu Dzemunhu isu tinounganidza uye nemamiriro ezvinhu chaiwo atinoshandisa.
EasyBiz Mileage Tracker inogona kushandura yako Dunhu Data nokuti:
Tinofanira kuita chibvumirano newe
Iwe wakatipa mvumo yekuita saizvozvo
Kugadziriswa kuri mune zvatinoda zvakakodzera uye hazvikwanisiki nekodzero dzako
Nokubhadhara kushandiswa kwezvinangwa
EasyBiz Mileage Tracker ichachengetedza Personal Data yako chete kwenguva yakareba sezvakakosha nokuda kwezvinangwa zvinoratidzwa muMutemo Wekuita. Tichachengetedza uye tishandise Dhiyabhorosi yako pachako zvichidiwa kuti uite maererano nemitemo yedu yepamutemo (somuenzaniso, kana tichida kuchengetedza deta yako kuti titevedze mitemo inoshanda), gadzirisa kusawirirana nekusimbisa zvibvumirano zvedu zvepamutemo nemitemo.
EasyBiz Mileage Tracker ichachengetedzawo Usage Data yepakati yekuongorora zvinangwa. Kushandisa Dhiyabhorosi kunowanzochengeterwa kwenguva shomanana, kunze kwekunge iyi dhesi iko kushandiswa kusimbisa kuchengeteka kana kuvandudza kushanda kweBasa redu, kana isu tinosungirwa zviri pamutemo kuchengetedza data iyi kwenguva yakareba.
Mashoko ako, kusanganisira Personal Data, anogona kuendeswa kune-uye akachengetedzwa pa - makombiyuta ari kunze kwehurumende yako, province, nyika kana humwe hurumende iyo masimba ekuchengetedzwa kwemashoko anogona kusiyana neavo ehurumende yako.
Kana iwe uri kunze kweUnited States uye uchisarudza kugovera ruzivo kwatiri, tapota cherechedza kuti tinotumira dheta, kusanganisira Personal Data, kuUnited States uye kuigadzira ipapo.
Mvumo yako iyi yeMutemo Wekutevera inoteverwa nekutumira kwako kwemashoko akadaro inomiririra chibvumirano chako chekuendesa iyo.
EasyBiz Mileage Tracker inotora matanho ose zvakakodzera kuti uone kuti deta yako inorapwa yakachengeteka uye maererano neChinyorwa Chekuona uye hapana kuwedzerwa kweZvako Dunhu Dzakaitika kuchaitika kune sangano kana nyika kunze kwekunge kune hutano hwakakwana panzvimbo iyo kusanganisira kuchengetedzwa kwemashoko ako nedzimwe ruzivo rwemunhu.
EasyBiz Mileage Tracker inogona kuzarura Data yako yega yega mukutenda kwakanaka kuti chiito chakadaro chinofanira ku:
Kuti zviite maererano nemitemo yepamutemo
Kudzivirira nekudzivirira kodzero kana pfuma yeAlexBiz Mileage Tracker
Kuchengetedza kana kutsvaga kukanganisa kunogona kuitika maererano neHurumende
Kuchengetedza kuchengetedzwa kwega kwevashandi veNhare kana vanhu
Kuchengetedza kudzvinyirirwa pamutemo
Kuchengetedzwa kwemashoko ako kunokosha kwatiri asi yeuka kuti hapana nzira yekutsvaga paInternet kana nzira yekugadzira magetsi ndeye 100% yakachengeteka. Kunyange isu tichiedza kushandisa nzira dzekutengeserana dzinogamuchirwa kuchengetedza Dhiyabhorosi yako, hatigone kuvimbisa kuchengeteka kwayo zvachose.
Yako Dhina Kudzivirira Kodzero pasi peGener Data Protection Regulation (GDPR)
Kana iwe uri mugari weEurope Economic Area (EEA), iwe une dzimwe kodzero dzekuchengetedza kodzero. EasyBiz Mileage Tracker inotarisira kutora matanho anokwanisa kukubvumira kururamisa, kugadzirisa, kubvisa kana kugadzirisa kushandiswa kweDa Data yako.
Kana uchida kuziviswa nezveChipi Data Chako chatinacho pamusoro pako uye kana iwe uchida kuti chibviswe kubva kumitambo yedu, tapota taura nesu.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, iwe une kodzero dzekudzivirira dzinotevera:
Iko kodzero yekuwana, kuvandudza kana kubvisa ruzivo rwedu tine iwe. Pose paunokwanisa kuita, unokwanisa kuwana, kuvandudza kana kukumbira kubviswa kweDain Data yako zvakananga muchikamu chako chezvigadziro zvekombiki. Kana iwe usingagoni kuita zviito izvi iwe pachako, tapota taura nesu kuti tikubatsire.
Kodzero yekugadzirisa. Iwe une kodzero yekuita kuti mashoko ako agadziriswe kana mashoko iwayo asina kururama kana asina kukwana.
Kodzero yekuramba. Iwe une kodzero yekupikisa kushandiswa kwedu kweDain Data yako.
Kodzero yekudziviswa. Iwe une kodzero yekukumbira kuti tidzivise kushandiswa kwemashoko ako ega.
Iko kodzero yekuisa deta. Iwe une kodzero yekugoverwa kopi yemashoko atinayo pamusoro pako mune zvakagadziridzwa, zvinogadzirwa nemichina uye zvinowanzoshandiswa.
Kodzero yekurega kubvuma. Iwewo une kodzero yekurega kubvumirwa kwako chero nguva apo EasyBiz Mileage Tracker yakavimbika kubvumwa kwako kugadzirisa ruzivo rwako pachako.
Ndapota cherechedza kuti tinogona kukukumbira kuti uone kuti uripi iwe usati wapindura zvikumbiro zvakadaro.
Iwe une kodzero yekunyunyuta kune Data Protection Authority pamusoro pekuunganidza kwedu nekushandiswa kweDain Data yako. Kuti uwane mamwe ruzivo, tapota taura nharaunda yako yekudzivirira kodzero yedunhu muEurope Economic Area (EEA).
Tinogona kushandisa makambani evanhu vatatu nevevanhu kuti vatungamirire Sangano redu ("Vapevisi Vanopa"), vanopa Service nokuda kwedu, vanoita mabasa ane chokuita neHurumende kana kutibatsira kuti tiongorore kuti Sangano redu rinoshandiswa sei.
Aya mapato matatu ane ruzivo rweMuD Data Dzega kuti uite mabasa aya nekuda kwedu uye anosungirwa kuti arege kuudza kana kuishandisa kune chero chinangwa chipi zvacho.
Isu tingashandisa vatatu veVatapi veHurumende kuongorora uye kuongorora kushandiswa kwebasa redu.
Google Analytics ibasa re web analytics rinopiwa neGoogle iyo inotora uye inoshuma webhusaiti yepaiti. Google inoshandisa data yakabatanidzwa kuti iongorore uye iongorore kushandiswa kwebasa redu. Iyi dhenda inowanwe nemamwe magwaro eGoogle. Google ingashandisa iyo yakagadzirirwa deta kuti igadzirise uye inofanidza zviziviso zvayo yekutengesa network.
Unogona kusarudza zvimwe zveGoogle Analytics kuburikidza nekugadzirisa mafaira efoni yako, zvakadai semasikirwo ako ekutsvaga kechirongwa kana nekutevera mirairo inopiwa neGoogle muChinyorwa Chavo Chekuita: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemitemo yega yega yeGoogle, tapota shanyira Google Privacy & Terms peji peji: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Firebase is service analytics inopiwa neGoogle Inc.
Unogona kusarudza zvimwe zvikamu zveMoto kuburikidza nemigadziro yako yefoni, zvakadai sezvirongwa zvako zvekushandisa zvipfeko kana nekutevera mirairo inopiwa neGoogle muIndaneti Yechirangaridzo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Tinokukurudzirawo kuti uongorore mutemo weGoogle wokuchengetedza deta yako: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemhando ipi yeruzivo rweMotokari inotora, tapota shanya paGoogle Privacy & Terms peji peji: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Isu tinogona kupa mishonga yakabhadhara uye / kana mabasa mukati meNhare. Muchiitiko ichocho, tinoshandisa zvikamu zvitatu zvebato rekubhadhara kushandiswa (semuenzaniso mari yekugadzirisa).
Hatingachengetedzi kana kutora zvido zvekadhi rako rekubhadhara. Mashoko iwayo anopiwa zvakananga kune vatatu vekubhadhara vatoriji avo vanoshandiswa kwemashoko enyu ega ari kutungamirirwa neChinyorwa Chavo Chekuita. Izvi zvinokonzerwa nekubhadhara zvinoenderana nemitemo yakagadzirirwa neCPI-DSS sezvinotungamirirwa nePCI Security Standards Council, iyo inobatanidza mazvikwata saVisa, MasterCard, America
Taura uye Zivhura. PCI-DSS zvinoda kubatsira kuchengetedza zvakachengetedza kushandiswa kwekubhadhara mashoko.
Maitiro ekubhadhara atinoshanda nawo ndeaya:
Nzira Yadzo Yezvokuchengetedza inogona kuonekwa pa https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
Sungano kune dzimwe nzvimbo
Basa redu rinogona kunge rine zvigaro kune dzimwe nzvimbo dzisingashandisi nesu. Kana iwe ukanyora chikamu chechitatu chekubatanidza, iwe uchatungamirirwa kune iyo yechitatu yewebsite. Isu tinokukurudzira zvikuru kuti uongorore Purogiramu Yechirangariro yewebsite yaunoshanyira.
Hatina simba rekutarisa uye tisingatori mutoro wezvakabatanidzwa, mazano ehupachena kana maitiro eimwe nzvimbo yechitatu yemasangano kana maitirwo.
Hatizivi kuti tinounganidza ruzivo rwemunhu oga kubva kune ani zvake pasi pezera re 18. Kana uri mubereki kana muchengeti uye iwe unoziva kuti Mwana wako akatipa isu nezveDhina Data, tapota taura nesu. Kana tikasvika pakuziva kuti takaunganidza Data Data kubva kune vana pasina kuvimbiswa kwemvumo yevabereki, tinotora matanho ekubvisa mashoko aya kubva kumaseva edu.
Kuchinja kune Izvi Zvido zveNzira
Tichakuudza iwe kuburikidza ne-mail uye / kana chiziviso chakakurumbira pamusoro pebasa redu, kusati kwachinja kushanda nekugadzirisa "zuva rinobudirira" pamusoro peNyaya yePasita.
Kana iwe uine mibvunzo pamusoro peiyo Mutemo Wechirongwa, tapota taura nesu:
Ne email: bizmileapp@gmail.com
kunyora pepa muusiku humwe
Kudzidza Kunyora - Kukosha Kwemunyori
Zvakanakisa Zvekuisa Zvikwereti
Mapepa Akachipa Ongororo - Maitiro Akapusa Ekutsvaga Huru Hwakanaka Bepa paMitengo Inonzwisisika
Tsika Pepa nekushandisa kwaro
Iwe Unofanirwa Kudzidzira Chokwadi NezveMakadhi Order Brides?
Kunyoresa Pamusoro NeSweden Mailorder Mwenga
Essay Service: Kusarudza Chakakodzera Chinyadzo Service
Essay Kunyora - Matipi Evadzidzi Vachinyora Yekutanga Kana Yechipiri Essays
Akanaka Zvishandiso Zvekunyora Rako Pepa
Kuongorora iyo ASOL
Tora yako Zuva Rokubhadhara Zvikwereti paInternet
Nzira Yokuwana Nayo Mapepa Ekutsvagisa
Maitiro Ekuwana Akachipa Mapepa Ekutarisa
Ungasarudza Sei Runyorwa rwePepa Runyoro?
Maitiro Ekuseta Iyo Email Order Mukadzi
Tenga Nguva Mapepa Kubva Kwakasiyana Masosi
Rubatsiro rwePepa Rubatsiro - Tsvaga Iyo Yakanaka Internet Kubatsira Services
Yekutsvaira Pepa Kunyora Sevhisi - Yakanakisa Nzira Yekudzivirira Inodhura Zvikanganiso
Maitiro Ekudhinda Netsika Pepa
Shandisa Iyo Webhu Kubatsira Essay
Kunyora Pepa Rekutsvagura - Zvese Zvaunoda Kuziva
© 2016 Bateaux Theme. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.